Yelena Moskovich's A Door Behind a Door Review: Fifindra-monina sy Fitetezam-paritra | tantara foronina - World Book
Ny tantara nosoratan'i Yelena Moskovich teo aloha, Virtuoso, dia nampahafantatra antsika ireo mpilalao avy amin'ny firenena maro ary nifantoka tamin'ireo tra-boina tamin'ny traikefan'ny vondrona Sovietika teo aloha rehefa zatra tamin'ny fiainana tany Andrefana izy ireo, matetika ka manimba ny fifandraisany akaiky indrindra. Virtuoso dia mampiasa rindran-potoana tapaka sy teknika fitantarana episodika izay mahomby indrindra amin'ny fampitana ny fahatsapana mivaingana eo amin'ny fon'ny traikefa mpifindra monina sy hafahafa; Ny fahaizan'i Moskovich mampiasa endrika ho ampahany mavitrika amin'ny fitantarana dia mahatonga ny famakiana tsy hay hadinoina. Ny bokiny vaovao, A Door Behind a Door, dia mahavita manaitra ny fanavakavahana ihany koa.
Eto isika dia mihaona amin'i Olga, tanora nafindra avy amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha teo amin'ny faha-90 taonany, monina ao Milwaukee, Wisconsin ankehitriny. Nihaona sy raiki-pitia tamin'ny mpitsabo mpanampy iray antsoina hoe Angelina izy, fifandraisana izay manome azy fitoniana amin'ny farany, indrindra rehefa eken'ny fianakavian'ny sipany izy. Ny antso an-telefaona tsy nampoizina tamin'ny faran'ny alina dia nanontany momba ity fiarovana vaovao ity. Ny mpiantso dia i Nikolai, mpamono olona voaheloka ary mponina taloha tao amin'ny trano fonenan'ny Sovietika izay nahalehibe an'i Olga. Manizingizina amin'ny fivoriana izy, ary milaza fotsiny fa mety hiankina amin'izany ny ain'i Moshe rahalahin'i Olga.
A Door Behind a Door dia mampiasa tantara momba ny mpitsongo, na dia tsy dia liana amin'ny famahana mistery aza i Moskovich, toy ny ao amin'ny Virtuoso, fa tsy mikaroka toe-tsaina. Nikolai, ilay vehivavy antitra novonoina, no mpifanolobodirindrina aminy ambony rihana, ary rehefa miha-mizarazara hatrany ny fihetsik'ilay tantara, dia tsy maintsy miasa isika mba hanambatra ny anjaran'ireo olona isan-karazany: mpandroso sakafo kafe, voafonja, zatovo roa mandehandeha eny amin'ny toeram-pivarotana iray, tanora iray. lehilahy jamba amin'ny maso ilany, lehilahy tsy manan-kialofana tsy manan-kialofana - mifandray izy ireo.
Tsy hitanao matetika ny fanoratana toy izany: tena manakorontana sy manavao.
Hoy i Nikolai tamin’i Olga: “Mba ho any amin’ny helo, dia mitondra anao manerana an’i Etazonia izy ireo. Misy varavarana ao ambadiky ny varavarana iray”, ary ankoatra an’io fidirana miafina io no misy ny valin’ireo fanontaniana mitombo hatrany. Tena any amin’ny helo tokoa ve isika sa miray tsikombakomba amin’ny fahatsiarovana ireo efa maty? Rehefa mahita bebe kokoa momba ny fitaizana feno herisetra an'i Nikolai, ny fianakavian'i Olga nisara-bazana, ary ny fangirifiriana nandrava ny fiainan'ilay vehivavy novonoina, dia fantatsika koa fa ny traikefa amin'ny maha-mpifindra monina dia mitovy amin'ny fitokanana ara-tsaina sy fanilikilihana ara-tsosialy toy ny fahasarotana azo ampiharina. .
Ny anaran'i Nikolai, Neschastlivyi, dia midika hoe 'tsy faly', ary rehefa nahita azy voalohany tamin'ny 'palitao hoditra Sovietika' i Olga, dia nanamarika izy fa 'sosotra be sy tsy ampy sakafo izy, mihantona amin'ny fihetsiny toy ny saribakolin'ny ady'. Manimba ny herin’ny lasa, ary hery tsy azon’i Olga atao tsinontsinona izany satria tsapany koa izany. lanjan'ny fatiantoka teo aloha. Ny fanondroana literatiora fototra dia ny tononkalo nosoratan'i Mikhail Lermontov tamin'ny 1832 Parus (Ny labozia), nosoratana taloha kelin'ny nialany tao amin'ny Oniversiten'i Moskoa mba hirotsaka ho miaramila. Lermontov dia toetra sarotra sy tia tena izay nanafina ny fahaizany mamorona mba ho tafavoaka velona amin'ny fiaraha-monina ultra-masculine izay niainany. "Inona no atao hoe fiainana," hoy i Olga, manonona ny tononkalony, "raha tsy afaka miditra an-tsitrapo ao anatin'ny tafio-drivotra ianao?" Tsy azo atao ny manao fampitahana ny nanjo ny mpiray tanindrazana aminy Nikolai sy ny fahafatesan'i Lermontov tamin'ny duel teo amin'ny faha-26 taonany.
Raha ny momba an'i Virtuoso, ny tena mahaliana an'ity tantara ity dia ny fiteny sy ny endriny. Ny mpanoratra dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny teatra sy ny tantara an-tsehatra toy ny Pushkin's Eugene Onegin ao amin'ny asany, ary amin'ny lafiny fampisehoana sy mampientam-po no iainan'ny tantaran'i Olga sy Nikolai. Ny lahatsoratra eo amin'ny pejy dia mitovitovy amin'ny script ho an'ny tantara an-tsehatra iray, ary ny fanodikodinana plastika nataon'i Moskovich amin'ny fiteny dia manery antsika hiaina ny fihenjanana sy ny tsy fahazoana aina ao amin'ilay tantara saika toy ny fahatsapana ara-batana. Tsy matetika ianao no mahita manoratra toy izao: tena manakorontana sy manavao, fanandramana amin'ny endrika izay mampatahotra ny farany.
A Door Behind a Door by Yelena Moskovich dia navoakan'ny Influx (£8,99). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, mividiana dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.
Sokajy Vaovao farany Tags Door, Fiction, Fifindrà-monina, Moskovich, Nationals, FAMERENANA, Tsangatsangana, Yelena Ticket navigation
Famerenan'i Rob Percival's Meat Paradox: famonoana hena ve izany? | boky fiaraha-monina